सिटी र लिभरपूललाई क्लिन सिट!! युनाइटेडको पदर्शन फिक्का!! भार्डी लेस्टरमा फर्किदै !! प्रिमिएर लिगको पूर्ण विवरण - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
प्रिमिएर लिग फुटबल खेलको छैटौ म्याच डेको दोस्रो खेलमा ५ खेल सम्पन्न भए जसमा म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपूलले मात्रै क्लिन सिट प्राप्त गर्यो।
लिभरपूल बिरुद्ध साउथयामटन
लिभरपूलको घरेलु मैदान यांफिल्डमा भएको साउथयामटनबिरुद्धको खेलमा लिभरपूलले3गोल गर्न सफल भएको छ जसमा पहिलो गोल वेस्ली साउथयामटनका खेलाडीले आफ्नै गोल पोस्टमा गरेका थिए। यसको साथै लिभरपूलका निम्ति २१ र ४५+3 मिनेटमा माटिप र मोहमद सलाहले गोल गर्न साफल भएका थिए।
यस खेलसंगै लिभरपूललाई प्रिमिएर लिगमा सर्बाधिक क्लिन सिट मिलेको देखिन्छ। राम्रो डिफेन्स र राम्रो खेलका निम्ति लिभरपूललाइ लिन सकिन्छ। च्याम्पियन लिगमा समेत राम्रो पदर्शन गरेको लिभरपूल प्रिमिएर लिगका निम्ति टाइटलको दाबेदार मान्न सकिन्छ।
कार्डिफ सिटी बिरुद्ध म्यानचेस्टर सिटी
कुनै पनि खेल न जितेको कार्डिफ सिटी आजको घरेलु खेल गुमाउन पुगेको छ भने सिटीका निम्ति क्लिन सिट कायममै रहेको छ। आज भएको दुइ सिटीको खेलमा म्यानचेस्टर सिटीले ५ गोल गर्न सफल भएको छ।
खेलमा सर्जियो अगेरोले ३२ औ मिनेटमा खाता खोलेका थिएसंगै पहिलो हाफमा 35 र ४४ औ मिनेटमा सिल्भा र गुन्दोगौले गोल गरेका थिए। यस्तै दोस्रो हाफमा दुवै गोल महारेज़ले ६७र ८९ मिनेटमा गरेका थिए।
लेस्टर सिटी बिरुद्ध हड्द्ल्सफिल्ड
गोल अग्रता लिएको हड्द्ल्सफिल्ड आखिर ३-१ गोलले सिटीको घरेलु मैदानमा हार ब्येहोरेको छ। फिल्डका निम्ति जोर्गेंसनले पहिलो गोल खेलको ५ औ मिनेटमै गरेका थिए तर अग्रता जोगाउन फिल्डले सकेन जसमा सिटीका निम्ति जिमी भार्डीको मदतमा केलिचीले १९ मिनेटमा फिल्डका निम्ति बराबर गोल गरे
साथै म्याडिसनले ६६ मिनेटमा र लेस्टरका स्टार जिमी भार्डीले ७५ औ मिनेटमा गोल गर्दै सिटीलाई आफ्नै घरमा3अंक दिलाए।
क्रिस्टल प्यालेस बिरुद्ध न्यु क्यासल
दुवै टिम विरुद्ध कुनै गोल न हुदा १-१ अंक बाडेर खेल समाप्ति भयो।
म्यानचेस्टर युनाइटेड बिरुद्ध वोल्फ़
ओल्ड ट्रांस्फोर्डमा आफ्नै घरेलु मैदानमा वोल्फ्स बिरुद्धको खेलमा युनाइटेडले अंक बाड़ेको छ। युनाइटेडका निम्ति १८ औ मिनेटमा फ्रेडले गोल गरेका थिए पहिलो हाफमा अग्रता लिएको युनाइटेडले गोल जोगाउन सकेन र ५३ औ मिनेटमा मौन्तिनोको गोलमा बराबरीमा रोकिन पुग्यो।
यस सिजन युनाइटेडको पदर्शन निकै सुखद रहेको देखिएको छैन। च्याम्पियन लिगमा युबेन्ट्ससंगको खेल के हुने हो त्यो भने हेर्न बाकी नै रहेको छ।
वार्टफर्ड विरुद्ध फुल्हाम
प्रिमिएर लिग फुटबल खेलको छैटौ हप्ताको पहिलो खेल वार्टफर्ड विरुद्ध फुल्हाममा अंक बाढेका छन्। नेपाली समय ५:१५ बजे भएको उक्त खेलमा वार्टफर्डका आन्द्रे ग्रे द्वारा पहिलो गोल खेलको दोस्रो मिनेटमै गरेका थिए।
फुल्हामको घरेलु मैदानमा भएको आजको खेलमा फुल्हामका फरवार्ड एलेग्जेंडर मित्रोभिचले ७८ औ मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याएका थिए। खेलमा निकै सुन्दर अवसरहरु मित्रोभिचले गुमाउन पुगेका थिए।
आजको खेलसंगै मित्रोभिचको गोल संख्या ५ पुगेको छ। प्रिमिएर लिगमा छैटौ हप्ताको खलमा आइपुग्दा मित्रोभिच संगै एडेन हाजार्डको समेत ५ गोल रहेको छ। यस्तै ब्राइटनका ग्लेन मुर्रयको ४, युनाइटेडका रोमेलु लुकाकुको ४ साथै लिभरपूलका सदियो मानेको ४ गोल रहेको छ।
अवसर र राम्रो टिम फर्ममा रहेको टोलिमा रहेको भए साएद मित्रोभिच अग्र स्थानमा खेल र गोल हुने थियो। उनि आफ्नो खेल सर्बिया देशबाट खेल्दछन।
अर्को खेल तिन लगातार व्यहोरेको टिम स्पर्स र ब्राइटन भिड्दै छन।